Ukulungele ukuzala umntwana wokuqala womzalwana okanye udade, kodwa intloko yentsapho ayifuni ukukuxhasa. Yonke imizamo yakho yokumkholisa ngokuphambene nokuphela kweengxabano kwaye awukwazi ukuba wenzeni ukuba umyeni akafuni umntwana wesibini.
Ukuze uzame ukuphendula umbuzo wakho, kuya kufuneka ufumane izizathu zokuthi "ukwesaba owesilisa". Ewe, akukho nto iza kugqitywa, kwaye wena, nangayiphi na imeko, kuya kufuneka ubizele umyeni kwingxoxo engenangqiqo. Mhlawumbi akalungele ukuziphatha. Ingaba umntwana wakho wokuqala wayengumntwana ocwangcisiweyo? Ukuba indoda yakho kanye ngaphambi komtshato ifumene ukuba ulindele umntwana, kwaye isigqibo somtshato sasisigqibo esinyanzelekileyo kwiimeko ezavela, ungamangaliswa ukuchaswa kwakhe. Akaxhomeke ngokuziphatha ngokwaneleyo ukuba abe nguyise. Zama ukuzilungiselela, zikhuthaze, zidumise xa zinyamekela umntwana wokuqala. Xa entlokweni yakhe ihleli ngokuzithemba, njengokuba ubaba, ngoko, mhlawumbi yena uya kukunika ithuba lokuzala umntwana. Yenza konke okungahambiyo, ngaphandle koko, ngaphandle kokuchasana, awuyi kufeza nantoni na.
Yintoni enokuyenza ukuba umyeni akafuni umntwana wesibini aze akhulume ngokukhipha isisu? Okokuqala ningakhathazeki. Indoda ayisoze yakuqonda into yokuba uvakalelwa ngayo njengomntwana kwaye ubona ukukhupha isisu njengoluhambo oluqhelekileyo kugqirha. Ukuthobeka kunye nokuthetha ngokukholisa ngaye, mnike iingxabano ezinzulu. Cacisa ukuba ukukhipha isisu kukubulala, kwaye awufuni ukubulala umntwana kumyeni wakho othandekayo, ubonise iziphumo ze-ultrasound, ngakumbi ngakumbi, ukuba yi-video yokurekhoda kwi-3D. Kuzo zonke "imibala" xelela ngemiphumo yokukhipha isisu. Ukuba umyeni wakho uyakuthanda ngokwenene, ngoko uyayithanda impilo yakho kwaye, xa ucinge ngento engcono, akayi kukuvumela ukuba ungene kulwaphulo-mthetho. Kukho iimeko xa kukho ukukhulelwa okwesibini okufunekayo ukuxazulula izifo zabesetyhini, kulo mzekelo, uye kudokotela kunye kunye. Ingcaciso ekholisayo yengcali iza kunceda ukugcina ukukhulelwa.
Umyeni akafuni umntwana wesibini ngenxa yokungazinzi izinto? Emva koko hlalani kunye kwaye ubhale phantsi kwiphepha, ubale zonke iindleko zangoku zomntwana. Uninzi kunokwenzeka, isibalo asiyi kuba "soyikekayo" kwaye uhlahlo lwabiwo-mali lwenu luya kuluqonda. Funda ukugcina. Unokuchaza ukuba izinto ezininzi "ziya kudlula" kumntwana wokuqala, eziza kunciphisa kakhulu iindleko ezicwangcisiweyo.
Ukuba sele usuphethe umntwana wesibini ngaphakathi kwakho kwaye uyifihle kumyeni wakho, ke ungamangalisi ngoko impendulo yakhe. Ukukhulelwa okungalindelekanga akuyi kumkholisa, ngokuchaseneyo, uya kuziva ekhohlisiwe, kwaye ukulahlekelwa yithemba kuya kuthintela kakhulu ubudlelwane. Ukuphulukiswa ngale ndlela, indoda inokuthi inqabe ukuthetha nawe kunye nexesha elizayo kwaye akukho mva wokuba unomsebenzi uya kunceda. Isigqibo sesithandwa somfazi sinokukhathaza kakhulu ukukhukhula komntu, ngakumbi xa "igama lokugcina liyakhe," kodwa ngokukhawuleza unezigqibo ezizimeleyo. Ngaphambi kokuba wenze njalo, cingisisa ngemiphumo.
Umyeni akafuni umntwana wesibini ngenxa yokuba umntwana wakho wokuqala ekhula engenakuxhaswa, kwaye ingcamango yokulala ubusuku iyamthusa. Mhlawumbi ukukhulelwa kwakho kokuqala kwakunzima kwaye ukwesaba ukulahlekelwa nguwe akuyi kumnika ukuphumla. Ngaba unako, nangona wenza imisebenzi yasekhaya kwaye ukhulisa umntwana wokuqala, ungayikhokheli ngokwaneleyo umyeni wakho, kwaye uyamelana ngenxa yokuba akafuni "ukunyanzelwa" kwi "mvelaphi"?
Ukuba ulwalamano lwakho lwentsapho aluhlakuli, isongelo sokuqhawula umtshato, kwaye unqume ukuba umntwana wesibini uya kuba "ibhokisi lokuphila" lokuphila "kwintsapho" yakho, oko akunjalo. Umntwana ongafunekiyo uya kuba ngumsindo, kwaye kutheni simele simgwebe umntwana ngaphambili? Ukuba le ndoda yagqiba ukushiya intsapho, ngoko ke iyazala, okanye ingazalanga - ayiyi kumgcina.
Cwangcani kunye umntwana wesibini kwaye zonke iintaba ziya kuba "ehlombe lakho"!
Amadoda amahle kakhulu kwihlabathi
Indlela yokukhetha umyeni omhle
I-Beef Stroganoff kwi-Multivariate
Ukuziphatha komntu othanda kuphela ngesondo
Ikhekhe lekhilimu enomuncu nge-icing
I-Steak kwientlanzi ebomvu
Strawberry nge mascarpone
Isisu sam siphula: zeziphi izizathu kunye nento enokuyenza ngayo?